Bakka buutonni Twitter har’a dhimma qorannaa Raashiyaan filannoo US waggaa darbee keessa harka qalfachuu ilaalchisee koree basaasaa kan Senetii waliin mari’achuuf jecha miseensota mana maree kan koree Sanaa waliin wal arguuf jiru.
Wal ga’ii dhumti wal fakkaatu jalqaba baatii kanaa Facebook waliin geggeessamuu dhaan beeksisaawwan dhimmootii hawaasaa fi siyaasaa Raashiyaa waliin wal qabate kum sadii seera tumtootaaf dhiyeessuuf walii galtee irra ga’ameera.
Koreewwan kun oduuwwan kijibaa faca’uu isaa kan qoratuu ta’uun beekamee jira. Gama Twitternis mala odeeffannoon battala ittiin wal ga’uu danda’u kan qoratu ta’uun ibsameera.
Twitteriin adeemsa filannoo geggeessamee kan kabaju ta’uu beeksisee dirreen twitter faallaa kampanii keenyaa kan hojjetamu hojii dharaa kamiinuu dura ni dhaabbata jechuun ibsee jira. Qorannaa geggeessamu waliin illee walii galtee kan agarsiisu ta’uu ibsee jira. Mariin kampanilee teknooloojii kana waliin geggeessamu amaaf uummataaf cufataa yooo ta’u koreewwan mana maree bakka bu’ootaa fi kan koree basaasaa haala filannoo waliin wal qabateen itti fayyadama marsariitii irraa mari’achuuf jiru.
Maalaawwiin Foyyee Agarsisaa Jirti jedhame